wuxuu yimid GvSIG 1.9 oo degan. Hurray !!! - Gofumed
GvSIG 1.9 way degantahay. Hooray !!!
Nofeembar, 2009 GvSIG
Toddobaadkan wixi isbedel ah ee gvSIG 1.9 ayaa lagu dhawaaqay, kaas oo aan ku laheyn RC1 bishii Agoosto iyo Alpha bishii December ee 2008.
version Taariikhdaan laga yaabaa sababta oo ah maturity waa ku filan si ay u kor loogu isticmaalo degmada, oo aan kuwa tiimbashada xumaanta ku quudhsadaan sameeyey ArcView 3x iyo gvSIG 1.3 sameeyey.
Waxay si daacad ah u guteen horumarinta ballanqaadka ah ee version Alpha, lagu calaamadiyay casaan Waxay ahayd mid dheeri ah, laguma xusin midka koowaad.
- Cajal ah cufnaanta dhibka.
- Tifatiraha calaamadda.
- Astaanta calaamadaha qalin-jabiyey.
- Astaanta calaamadaha saamigaliga ah.
- Tirada rukumo ahaan qayb ahaan.
- Heerarka calaamadaha.
- Akhrinta / qorista legends SLD.
- Dejinta astaamaha aasaasiga ah.
- Laba habab oo kala duwan oo loogu talagalay calaamadaha iyo calaamadaha (warqadda / adduunka).
- Ereyada ku saleysan filtarrada (muujinta).
- Abuuritaanka faahfaahin khaas ah.
- Xakamaynta xirmooyinka calaamadaha.
- Mudnaanta booska qoraallada.
- Muujinta calaamadaha gudahooda kala duwan.
- Hanuuninta calaamadaha.
- Fursadaha meelaynta kala duwan ee calaamadaha.
- Taageerada tirada ugu badan ee halbeegyada cabbirka loogu talagalay calaamadaha.
KALA JOOJINAYO IYO REMATAY
- Xogta dharka iyo xirmooyinka
- Dhoofinta Layer
- Qor qayb ka mid ah aragtida raajada
- Miisaska midabka iyo dufanka
- daaweynta qiimaha daaweynta Nodata
- Ku shaqeynta pixel (filtarrada)
- Daaweynta turjumaadda midabka
- Abuuritaanka Huurarka
- Cadaadiska Raster
- Iskudhin toos ah
- Qeexitaanka meelaha xiisaha leh.
- Qoondaynta kormeerka
- Qoondaynta lagama maarmaanka ah
- Geedaha go'aanka
- Fusion of images
- Jaangooyo kala duwan
- Muuqaal sawir ah
Qaar waxay u muuqdaan inaan la helin, sida lagu soo sheegey liiska isticmaalaha.
Mana ah SEXTANTE si toos ah loogu rakibay.
- Luqado cusub: Ruush, Giriig, Swahili iyo Serbian.
- Sii kordhinta maaraynta tarjamada.
Ingiriis (USA), Brazilian Portuguese, Turkish.
- Meelo cusub.
- Iska ilaali geesoole.
- Ku soo biir garowsiga.
- Xulashada hore
- Kaaliye cusub oo loogu talagalay inuu ku biiro miisaska.
-Ku darista qalabka geoprocessing si ay ugu shaqeyn karaan lakabyada laynka iyo sidoo kale lakabyo badan.
- Ku dar shabaqa si aad u aragto qaabka Layoutka.
- Sameeynta Sameeyaha ee layers ee waddada ay isbedeshay (SHP kaliya).
- Caawinaad online ah.
- Suurtogalka u ah isticmaalaha isticmaalka qashinka.
- Muujiyo cusub
- Isdhexgelinta maareynta CRS JCRS v.2 integrated.
- Hagaajinta akhrinta qaabka DWG 2004
- Hagaajinta hawlgalka iyo isticmaalka adeegsiga hyperlink.
- Xusuuso waddada halka ay ku yaalaan astaanta calaamadaha.
- Ku dar GeoServeisPort ee loo yaqaan 'nomenclator'.
- Qeybaha masaafada oo ka madax bannaan kuwa degaanka.
- Geli guryaha adigoo laba jeer guji.
Kuwa soo socda ayaa laga soo qaatay Wasaaradda Deegaanka ee Deegaanka Junta de Castilla de León, inkastoo GPS ayaa lagu soo bandhigay liisaska user.
- Xulashada jaantuska.
- Xulashada wareegga.
- Xulashada qaybta saamaynta (bakhti).
- Dooro wax kasta.
WARBIXIN KU SAABSAN
- Qalabka macluumaadka degdegga ah (marka caaradu weli ku jirto joomatari, qalab ama xajmiga hadalka oo leh macluumaadka joomatari ee la sheegay).
- Qalabka sawirada oo badan (koorsooyin badan ayaa u oggolaanaya inay u muujiyaan isku-duwayaasha aragtida isla mar ahaan isku-duwaha juqraafi iyo UTM, xitaa qoryo ka duwan kan loo xushay aragtida).
- Hufan sare, oo loogu talagalay inuu beddelo hyperlink hadda oo u ogolaanaya:
- Iskuday waxqabadyo kala duwan isla lakabka.
- Si sax ah u wada-hawlgal dhowr ficil oo aragti ah (tani si fiican uguma shaqeyn "hyperlink"); By default ay ka mid yihiin tallaabooyinka soo socda: muujiyaan image, lakabka lakabka ee aragtida, lakabka vektorka ah ee aragtida, muujiyo PDF, bandhig qoraalka ama HTML.
- Ku dar ficilada cusub ee gabboodfalka adoo isticmaalaya plugins.
DADKA DADKA DATA
- Dhoofinta joornaalada jadwalka ee DBF iyo qaababka Excel.
- Ku dar macluumaadka juquraafi in lakabka (miis dar "meesha", "wareega", iwm leh beeraha qasabno yar).
- Soo qaado beeraha (meelaha laga soo dhoofiyo miiska gudihiisa ama
tra, si joogto ah).
- Ku beddel dhibcooyinka xariijinta ama garaannada, iyo xariiqyada isugeynta, si isdhaafsan.
- Fiiri view, adigoo isticmaalaya template.
- Xulashada nidaamka rarista ee lakabyada (waxay u fasaxaysaa in la sheego in ay muuqaal ahaan u muuqdaan shaxannada sare ee raajada, tusaale ahaan).
- Naaquska automatic ah ee GVP marka la kaydinayo mashruuca.
Hadda waa ay adag tahay in la soo dejiyo, sababtoo ah webku waa nus ka mid ah saddex maalmood oo laba maalmood ah, oo u muuqda inuu yahay qalad dhinaca kale.
Haddii uu nool yahay, way awoodaan ka soo qaado halkan
Haddii kale, tani waa bedel kale oo leh JRE y iyada oo aan JRE iyo ka FTP
Waqti fiican, waxaan isku dayi doonaa toddobaadkan.
Post Previous«Previous Bil walba
Post Next Miisaanka Google GoogleNext »
5 Jawaab ayaa ku timid "GvSIG 1.9 oo deggan. Hurray !!! "
FABIOLA T isagu wuxuu leeyahay:
Kama soo bixi karo.
Waxay gaareysaa xiriirka http://www.gvsig.org/web/ markaa waxba ma dhicin.
gvSIGista isagu wuxuu leeyahay:
Haa, daqiiqado 4 ayaa dhammeystiray download. 🙂
Alvaro Anguix isagu wuxuu leeyahay:
Waxay u muuqataa in OSOR ay dhibaato ka haysato codsiyada joogtada ah ee gvSIG downloads oo ay ku jiraan habka loo hagaajinayo.
Xiriir kale oo aad ka soo qaadan karto gvSIG 1.9:
Waxaan rajeynayaa inay tahay sababtoo ah dad badan ayaa soo dejinaya, maxaa yeelay cabashadu waxay ku jirtaa liiska qaybinta.
Soo dejintu aniga suurtagal maahan. Mid ka mid ah: ku dhawaad ​​dhammaan soo-dejimaha ayaa dib loo dhigaa illaa weligood (saacadaha) oo waxaan ku quustaa dadaalka. Laba: Waan sameeyey sidaas usbuuca dhamaadkiisa, waan soo degsaday! Dhibaatada ayaa ah in feylku isu rogo mid musuqmaasuq ah oo aanan waxba ku rakibi karin. Waan isku dayi doonaa inaan sii wado.